Home Wararka RW Suudaan oo caawa is casilay
RW Suudaan oo caawa is casilay
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa caawa iska casilay xilkii uu u hayay Shacabka reer Suudaan.
Khudbad uu si toos ah ugu jeediyey shacabka dalka Suudaan ayuu ku caddeeyay Cabdalla Xamduuk inuu amaanadii usoo celiyay shacabka Sudan, isagoo sheegay in xaaladda dalkaasi ay gaartay meel halis ah, isla markaana uu qaatay go’aankii ku haboonaa.
Is-casilaadiisa ayuu sabab uga dhigay inuu u arkay inay dan ugu jirto dalka Suudaan, markii ay ka hor yimaadeen dhibaatooyin badan oo uu ku guuleysan waayo mideynta dhinacyada siyaasadda iyo milateriga dalkaasi.
Cabdalla ayaa waxaa uu cadaadis xoog leh kala kulmay Dowladda Mareykanka taasoo keentay in uu caawa is casilo.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonty Blinken ayaa sheegay iney Washington diyaar u tahay iney tallaabbo ka qaadayso haddaan rabitaanka shacabka la tix gelin taasoo loo badinaayo in aay keentay iscasilaadda Cabdalla Xamduuk.
Blinken ayaa sidoo kale u sheegay saraakiisha ciidamada ugu sarreeya haddii ay rabitaanka shacabka Suudaan ay meel marin waayaan ay cawaaqib xumo la kulmayaan.
Previous articleSAWIRO: Rooble oo caawa la kulmay Madaxda dowlad goboleedyada qaar
Next articleXiisada colaadeed ee magalaada Baladweyne oo ka sii daraysa